मिस वर्ल्डको ताजनजिक नेपाल पुगिसक्यो
२०७७ मंसिर १ सोमबार ०७:४४:००
मिस नेपाल-२०२० कोरोनाको कहरकै बीच हुने भएको छ । यसअघि नै काठमाडौंबाहिर आठवटा सहरमा अडिसन लिएपछि कोरोनाका कारण थाती रहेको काठमाडौं अडिसन सम्पन्न गर्दै आयोजक हिडन ट्रेजरले प्रतियोगिताको फाइनल मिति पनि तय गरिसकेको छ । यसअघि हिडन ट्रेजरको आग्रहमा नेपाल आएकी मिस वर्ल्ड अध्यक्ष र मिस वर्ल्ड-२०१९ ले नेपाल भ्रमण गर्दै मिस वर्ल्ड-२०२० नेपालमा गर्नेबारे छलफल चलाएका थिए । सरकारसँग पहिलो चरणमा यसबारे छलफल पनि भएको थियो । तर, कोरोनाका कारण उक्त ठूलो प्रतियोगिता नेपालमा गर्ने कि नगर्ने छलफल चलिरहेकै बेला सुरु भएको कोरोना संक्रमणको त्रासले प्रक्रिया थप अगाडि बढ्न सकेन । उक्त प्रतियोगिता आउँदा वर्षमा नेपालमा हुने सम्भवना छ कि सधैंभरिका लागि सम्भावना टरेको हो ? मिस वर्ल्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व, उपलब्धि र टाइटल अवार्ड भित्र्याउने सम्भावना र मिस नेपाल-२०२० को सेरोफेरोमा रहेर मिस नेपाल आयोजक हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष दिवाकरराज राजकर्णिकारसँग बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानी :
कोरोनाका कारण अडिसन लिँदालिँदै बीचमै रोकिएको मिस नेपाल प्रतियोगिता कहाँ पुग्यो ?
आठवटा सहरमा लकडाउन गरिसकेपछि कोरोनाका कारण रोकिएको मिस नेपाल प्रतियोगितालाई हामीले पुनः अगाडि बढाएका छौं । यही नोभेम्बर १ मा काठमाडौं अडिसन सम्पन्न गरेका छौं । २१ जना प्रतिस्पर्धी छनोट गरिसकेका छौं । यो वर्ष २१ जना प्रतियोगी हुनुहुनेछ । उहाँहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइसकेका छौं । कोरोनाका कारण सामाजिक दूरी कायम गरेर आवश्यक कामहरु गरिरहेका छौं ।
प्रतियोगिताको फाइनलको मिति पनि तय भइसकेको छ । डिसेम्बर ५ मा फाइनल हुनेछ । प्राक्टिकलबाहेक लिडरसिप, सकारात्मक सोच, महिला सशक्तीकरणका तालिमहरु भर्चुअल रुपमा भइरहेका छन् ।
मिस नेपाल प्रतियोगिताको दुई साता अगाडिबाट पार्क भिलेज होटेलमा रेसिडेन्सियल ट्रेनिङ दिनेछौं । त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि ट्रेनर तथा प्रतियोगी सबैको पीसीआर टेस्ट गर्नेछौं । यो वर्ष छुट्टै वातावरणमा मिस नेपाल प्रतियोगिता हुने भएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजन, युट्युब तथा फेसबुकबाट लाइभ टेलिकास्ट हुनेछ । शनिबारको दिन पारेका छौं, सबैले घरमै बसेर हेर्नसक्नु हुनेछ ।
फाइनल प्रतियोगिता भर्चुअल हुने हो ?
कार्यक्रम स्टेजमा फिजिकल नै हुन्छ । तर, अडियन्स भने हुनु हुने छैन । स्वास्थ्य सुरक्षाका कारण दर्शक राखेर फाइनल प्रतियोगिता हुने छैन । प्रतिस्पर्धी र निर्णायकलाई पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
प्रतिस्पर्धीका लागि प्रयोगात्मक तालिमहरु कम गरिएको र फाइनल पनि दर्शकको उपस्थितिविना गर्दा पब्लिसिटी र प्रतियोगीले निखारिने मौका तुलनात्मक रुपमा कम पाउने भए ?
बीचबीचमा भइरहेका गतिविधिहरु सञ्चारमाध्यममा आउँछन् । मंगलबारबाट पब्लिक च्वाइस अवार्डका लागि बायोडाटासहित तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा रिलिज गर्दै छौं । उनीहरु स्वयंले आफ्ना लागि टेलिभिजन, अनलाइन तथा पर्सनल सामाजिक सञ्जालहरुबाट भोट अपिल गर्नेछन् । पब्लिक च्वाइसका लागि हुने अपिलले पनि प्रतियोगिताको पब्लिसिटी हुन्छ ।
बाँकी रह्‍यो प्रतिस्पर्धीको इनह्यान्सको कुरा । तालिमहरु लिइरहनुभएको छ । रेसिडेन्सियल तालिममा पनि उहाँहरुले धेरै कुरा सिक्नु हुनेछ । भर्चुअल रुपमा पनि धेरै तालिम लिइरहनुभएको छ । कोरोनाका कारण आमजनताबीच जान भने सम्भव भएन । त्यति मात्रै हो, बाँकी सबै अघिल्ला वर्षहरुका प्रतियोगिता जस्तै नै हो ।
कोरोनाले आयोजकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा केही समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ ?
आयोजकलाई आर्थिक रुपमा चाहिँ धेरै समस्या छ । पहिलो कुरा त पब्लिकमा टिकट सेल हुन्थ्यो, त्यहाँबाट आउने रकम स्वत: कम हुने भयो । स्पोन्सर पनि यो वर्ष कमै हुन्छ । १५ दिनको रेसिडेन्सियल ट्रेनिङ आयोजना गर्दा त्यहाँ थप खर्च बढ्ने छ । तर, हिडन ट्रेजरले यति लामो समयदेखि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मिस नेपाल प्रतियोगिता गर्दै आएको हुँदा त्यो इमेज बचाउन र त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि कुनै कम्प्रमाइज नगरी कार्यक्रम गर्छौं । टाइटलको गुणस्तर खस्किन दिँदैनौं ।
आम जनतामा जान नसक्ने वर्तमान अवस्थामा पहिलाकै अवस्थामा प्रतियोगिलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्दै अब्बल बनाउन कतिको सम्भव छ ?
सकिन्छ । भर्चुअल माध्यमबाट तालिमहरु भइरहेका छन् । होटेलमा प्रवेश गरिसकेपछि फिजिकल रुपमा पनि तालिम हुने भएकाले सम्भव छ । यसअघि हामी रेसिडेन्सियल ट्रेनिङमा राखेको तीनदिनमा ग्रान्ड फिनाले हुन्थ्यो, यो वर्ष १५ दिन राख्दै छौं । प्रतिस्पर्धीलाई थप आत्मविश्वासी र सशक्त बनाउनकै लागि यो गरिँदै छ । तालिममा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैनौं । फाइनलका लागि स्टेजदेखि अन्य सबै कुरामा कोरोनाको प्रभाव परेको झल्को दिने छैनौं । मात्रै फिजिकल रुपमा फाइनल हुने छैन र पब्लिकसँग हुने क्रियाकलापहरु कम गरेका हौं ।
विजेताले पाउने अवसरमा उनीहरुले केही सम्झौता गर्नुपर्ने हो ?
त्यस्तो हुँदैन । चारवटा टाइटलमा विजेता छनोट हुन्छ । त्यसमा दुई लाख ५० हजारका दरले सबैले प्राइज मनी पाउनुहुनेछ । यसमा कुनै सम्झौता हुनेछैन । अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यो रकम बढेकै छ । उहाँहरुले पाउने माइलेजमा कमी आउँछ भन्‍ने लाग्दैन । पुराना मिस नेपाल तथा रनिङ मिस नेपालहरुले भर्चुअल कार्यक्रमहरु धेरै गरिरहनुभएको छ ।
अनुष्का श्रेष्ठ नै रोटरीको गुडबिल एम्बेस्डर भएर पाठेघरको क्यान्सर हुन रोक्न काम गरिरहनुभएको छ । अरु विजेताहरु पनि अगाडि बढिरहनुभएको छ । समयअनुसार सबैले आ-आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम गरिरहनुभएको छ ।
कतिले हिडन ट्रेजरले मिस नेपाल होइन ‘मिस नेवा:’ नाम राखे पनि हुन्छ भन्‍ने टिप्पणी गर्छन् नि ?
यसको जवाफ त म तपाईंसँग खोज्छु । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ । आजकाल सामाजिक सञ्जालमा जसले जे लेखिदिए पनि हुन्छ । तर, वास्तविकता त्योभन्दा धेरै टाढा छ । अहिले पनि हामीले धनगढीदेखि बिर्तामोडसम्म आठवटा सहरमा गएर अडिसन लिएका थियौं । त्यहाँका प्रतिस्पर्धीलाई काठमाडौंसम्म आएर अडिसन दिन समस्या हुन्छ भनेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गएर अडिसन लिएका छौं । जसमा चौधरी पनि हुनुहुन्छ । ब्राह्‍मण, क्षेत्री र चौधरी पनि हुनुहुन्छ । तराई, पहाड, मधेस पूर्वदेखि पश्चिम सबैतिरको प्रतिस्पर्धीलाई हामीले स्वागत गरिरहेका छौं ।
कुरा आयो कसले जित्छ भन्‍ने, कसले जित्छ भन्‍ने न मलाई थाहा हुन्छ न तपाईंलाई । हिडन ट्रेजरलाई पनि थाहा हुँदैन । किन भने ११ जना निर्णायक जो हिडन ट्रेजरबाहिरको व्यक्ति राखेका हुन्छौं । उहाँहरु आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुले दिने नम्बरका आधारमा विनर छनोट हुने हो । त्यसमा हाम्रो कुनै हात हुँदैन । कुन जात, समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिले जित्छ भन्‍ने थाहा हुँदैन ।
कहिले जेनिसा मोक्तानले जितेको छ, कहिले लिम्बू, चाण्डक र खतिवडाले जितेको छ । पहिलो मिस नेपाल नै रुबी राणा हुनुभयो ।
हिडन ट्रेजरले मिस नेपालका नाममा महिलालाई ‘सो पिस’ का रुपमा बढावा दिने कार्य गर्‍यो भन्दै ०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि केही वर्ष केही राजनीतिज्ञहरुले विरोध गरे (भलै त्यो अहिले मथ्थर भइरहेको छ ।) यसलाई हिडन ट्रेजरले कसरी समीक्षा गरिरहेहको छ ?
सकेसम्म विवादरहित कार्यक्रम गर्न सकौं भन्‍ने हाम्रो उद्देश्य हो । आयोजकको विरोध गर्ने, कार्यक्रम स्थलमा आयोजक, निर्णायक तथा प्रतिस्पर्धीलाई जान अवरोध गर्ने र नाराबाजी गर्ने काम पनि भयो । राजनीतिक व्यक्तिहरुका यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरुको सामना गरेर पनि हामीले यो प्रतियोगितालाई आजका दिनसम्म निरन्तरता दिँदै आयौं । र, आजसम्म यो प्रतियोगिता जारी छ किनभने हामी गलत थिएनौं । हामीले नेपाली चेलीहरुलाई राम्रो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएका हौं । भोलिका दिनमा समाजमा महिलाको सशक्तीकरण गर, समाज बदल्न भूमिका खेल र आफ्नो व्यक्तित्व पनि विकास गर भनेर प्लेटफर्म सिर्जना गरेका हौं ।
सबैले देखिरहनु भएकै छ, आज प्रमाणित भयो हामी गलत थिएनौं । किनकि तिनै राजनीतिक व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई मिस नेपालमा आफ्ना सन्तानलाई पठाइरहनुभएको छ । आफ्नो छोरीलाई मिस नेपाल प्रतियोगितामा गएर समाजमा आफ्नो छुट्टै छवि बनाऊ भनिरहनुभएको छ । हिजो र आजको अवस्था फरक छ । हाम्रा प्रतियोगिहरुको पृष्ठभूमि खोज्यो भने मेरो बुबाले, आमाले, दाजु र दिदीले इन्करेज गरेर पठाएको पाइन्छ । यो भनेको हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । पछिल्लो समय विरोध खतिवडाले आफ्नी छोरी श्रृंखलालाई पठाउनुभयो । बाहिर भनिनेजस्तो हुने भए उहाँहरुले किन आफ्नो सन्तानलाई पठाउनुहुन्थ्यो होला र ?
मिस वर्ल्डमा नेपालको उपस्थितिलाई लिएर हिडन ट्रेजरको समीक्षा ?
सन् २०१८ र २०१९ मा लागातार नेपालले मिस वर्ल्डमा ब्युटी विथ द पर्पस टाइटल जित्यो । यो बेस्ट अवार्ड हो । श्रृंखला र अनुष्काले मल्टिमिडिया अवार्ड पनि जित्नुभयो । मिस वर्ल्डमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाइसक्नुभयो । त्योभन्दा २०१३ मा इशानी श्रेष्ठले पनि ब्युटी विथ द पर्पस अवार्ड जितिसक्नुभएको थियो । अब त्यो दिन पनि धेरै टाढा छैन, एक दिन मिस नेपालले मिस वर्ल्डको टाइटल जितेर ल्याउनेछन् ।
त्यो दिन कहिले आउँला ?
कहिलेसम्म भनेर मिति तोक्न त सकिएन । तर, पछिल्ला वर्षमा हाम्रा प्रतिस्पर्धीको बलियो उपस्थिति हेर्दा नेपालले मिस वर्ल्ड जित्ने दिन धेरै टाढा छैन । लागातार दुई वर्ष नेपालले ब्युटी विथ द पर्पस र मल्टिमिडिया अवार्ड जितेको छ । टप १० र टप ६ मा आइसकेका छौं भने त हामी टाइटलसँग नजिक आइसकेका छौं भन्‍ने कुराको प्रमाण पनि हो । यसकारण पनि त्यो दिन धेरै टाढा छैन भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
नेपालाई मिस वर्ल्ड आयोजक संस्थाले चिनिसकेको छ । मिस वर्ल्डकी अध्यक्ष जुलिया मोर्ले र मिस वर्ल्ड २०१९ टोनी एन सिंह नेपाल आइसकेका छन् । नेपाल आएर अनुष्का र श्रृंखलाको प्रोजेक्ट भ्रमणमा हिँडेर दूरदराजका गाउँ पुगेका छन् । उहाँहरुले हामीले गरेको काम हेरेर तारिफ गरेर जानुभएको छ । यसले मिस वर्ल्डमा हाम्रो उपस्थिति थप बलियो बनाएको छ ।
मिस वर्ल्ड २०२० नेपालमा आयोजना गर्ने विषयमा चलिरहेको छलफल कोभिड-१९ का कारण त्यो बीचमै अलपत्र पर्‍यो । अवस्था सहज बनेपछि अब त्यो सम्भावना छ कि छैन ?
कोरोनाका कारण पर धकेलिएको मात्रै हो । सम्भावना टरेको होइन । उहाँ (जुलिया मोर्ले)को इच्छा त २०२० मै मिस वर्ल्ड नेपालमा गरौं भन्‍ने थियो । हामी पनि तयार थियौं । नेपाल सरकारबाट पनि यसका लागि ग्रिन सिग्नल आएको हो । तर कोरोनाका कारण त्यो पर धकेलियो । हामी आशा गर्न सक्छौं चाँडै मिस वर्ल्ड नेपालमा हुनेछ ।
अन्तिममा, धेरै मिस नेपालहरु अन्ततः चलचित्रमा आउने तर अपेक्षित सफलता पाउन सकिरहनुभएको छैन । हिडन ट्रेजरले यसलाई कसरी लिइरहेको छ ?
जितेको एक वर्ष त उहाँहरु हिडन ट्रेजरसँगै रहनुपर्छ, अरु कुनै गतिविधि गर्न पाउनुहुन्न । त्यसपछि उहाँहरुको व्यक्तिगत जीवन हो, जुनसुकै पेसा तथा व्यवसाय अँगाल्न सक्नुहुन्छ । व्यापार, व्यवसाय, मोडलिङ, चलचित्र जता पनि जानसक्नुहुन्छ । सफलता भनेको त व्यक्तिले गर्ने कामको नतिजा हो । हरेक व्यक्ति सफल हुने प्रयास गर्ने हो । त्यसमा कोही सफल हुन्छन्, कोही असफल हुन्छन्, यो कुरा तपाईंमा पनि र ममा पनि लागु हुन्छ । कोही सिनेमा त कोही मोडलिङ, कोही व्यापार त कोही सामाजिक कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ । कसैले सुरुमै सफलता पाउनु भएको छ भने केहीलाई समय लागेको छ । तर जति पनि मिस नेपालहरुले काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले गरेको कामलाई हामीले कम आक्नु हुँदैन । एउटा मिस नेपालले हजारौं, लाखौं महिलाहरुलाई सही मार्गनिर्देश गर्नसक्नुहुन्छ ।
अनुष्काले अहिले पाठेघरको क्यान्सरबाट महिलालाई बचाउने अभियानमा संलग्न भएर आगामी पाँच वर्ष काम गर्ने वचन दिनुभएको छ । उहाँ संलग्न भएकै बेला अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त भयो भने यो सानो सफलता हो र ? कसैले महिला सशक्तीकरण त केहीले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ । केही सञ्चारमाध्यममा हुनुहुन्छ । जो जता रहे पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । अहिलेसम्म जति पनि मिस नेपाल हुनुभएको छ, उहाँहरुले राम्रो छवि बनाउनुभएको छ । समाजमा रोलमोडलका रुपमा अगाडि बढिरहेको देख्दा आयोजकका नाताले खुसी छौं हामी ।
तस्बिर : दिवाकरराज राजकर्णिकारको फेसबुकबाट